११:२४, १२ नोभेम्बर २०१५ जस्तै गरी पुनरावलोकन
६७५ बाइटहरू हटाइयाे , ६ वर्ष अघि
Reverted3edits by 69.232.201.132 (talk) identified as vandalism to last revision by Jonathan1. (TW)
११:५३, ११ नोभेम्बर २०१५ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
69.232.201.132 (कुरा गर्ने)
११:२४, १२ नोभेम्बर २०१५ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (Reverted3edits by 69.232.201.132 (talk) identified as vandalism to last revision by Jonathan1. (TW))
== संस्कृति ==
क्यालिफोर्नियाको वर्तमान राज्यपाल एडमण्ड जी "जेरी" ब्राउन हुन्।हुन। ब्राउन १९७५ देखि १९८३ सम्म पनि राज्यपाल थिए, तसर्थ उनी राज्यको सबै भन्दा सबै भन्दा कान्छ र पाका राज्यपाल हुन।
बारबरा बक्सर, र डायनDianne फाइन्स्टाइनFeinstein: क्यालिफोर्नियाकोदुई दुईजनासीनेटरों सीनेटर भएर उनीहरूद्वाराद्वारा क्यालिफोर्नियाको प्रतिनिधित्व भएको छ।
खेती, चलचित्र बनाउनु, र उच्च प्रबिधि, अर्थात् सफ्टवेयर र वेब साईट: राज्य यि तीनको कारोबारमा एक नेता हो ।. एयरोस्पेस वहाँ एक ठूलो उद्योग हुनेगर्थ्यो, तर पछिल्लो २० वर्षमा आकार सानो हुदैछ।
वहाँ क्यालिफोर्नियामा धेरै भूकम्प गयो। उनीउनि हुन्छन् जब दुई पृथ्वी crusts भूमिगत बदलाव। क्यालिफोर्नियाले भूकम्पको लागि र प्रयजसो संकटकालिन अबस्थाको स्थितिको मामलामा अतिरिक्त भोजन, पानी, टर्चflashlights, र प्राथमिक उकचारको बन्दोबस्त तयार भै रहनु पर्छ।
क्यालिफोर्नियामा [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को कुनै पनि अन्य राज्यभन्दा धेरै मानिसहरू छन् ।छन। यदि क्यालिफोर्निया एक अलग देश भएको भए यो विश्वमा छैठोंछैठो सबै भन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था हुने थियो। क्यालिफोर्निया शायद सबै भन्दा धेरै जातीय समूह भएको राज्य हो ।हो। आफ्नो ठूलो आकारको कारण, अन्य राज्यको तुलनामा शायद सबै भन्दा भौगोलिक विशेषताहरू छ - पहाड, मरुभूमि, तट - । यसलाई प्राय जसो गोल्डन राज्य भनियो, संभवतः १८४९ अघिको स्वर्ण दौडको कारणले ।कारणले। यसको वाहेक, केही घास गर्मिहरूको समयमा सुनौलो हुन्छन्हुन्छन र राज्यको फूल सुनौलो हो। हुलाक सेवाले क्यालिफोर्नियाको लागी आशुलिपिको रूप "सीए"को उपयोग गर्दछ र एसोसिएटेड प्रेसले कलिफ् वा कलि प्रयोग गर्दछगर्दछ। ।
राष्ट्रको व्यापार जीवनको साथ साथै क्यालिफोर्निया अमेरिकी संस्कृतिमा एक प्रमुख शक्ति हो। प्रबिधि र कानूनमा धेरै महान परिवर्तन क्यालिफोर्नियादेखिकोक्यालिफोर्निया देखि आएको छ, राज्य र अमेरिकी सरकारको लागि अझ धेरै भुगतान गर्दछ यसले फिर्ता फिर्ता पाउने भन्दा। यहा देशको सबै भन्दा ठूलो शहरहरू पनि छन्छन, जस्तो की [[लस एन्जलस]]एंजिल्स, [[स्यानसैन डिएगो]], [[सान होसे,क्यालिफोर्निया|सानसैन होसे]]जोस, र [[स्यानसैन फ्र्यान्सिस्को]]फ्रान्सिस्को ।
अतीतमा, जुन पुरा क्षेत्रलाई अहिले हामी "क्यालिफोर्निया" भन्दछौंभन्दछौ, आजको क्यालिफोर्निया थिएन । तर पनि यसको दक्षिणमा रहेको मेक्सिकनमेक्सिन भूमिलाई पनि समेट्दथ्यो, त्यसैगरी नेभादानेवादा, युटाUtah, र एरिजोना र वायोमिङ्गकोWyomingको केही भागहरू । जमीनको त्यो हिस्सा जुन अंततः [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को भाग थियो लाई स्पेनिस भाषिहरूले "आल्ताAlta कालिफोर्निया"क्यालिफोर्निया (माथिल्लोमाथि क्यालिफोर्निया) भने जब यो "बाहाबाजा कालिफोर्निया"क्यालिफोर्निया (तल्ललोअर क्यालिफोर्निया) देखि विभाजित भएको थियो । यिनी प्रारम्भिक समयमा, कोर्तेसकोरटेज र प्रशांत तटको सागरको सीमाहरूको राम्ररी ज्ञात थिएनन्, यसैले क्यालिफोर्निया एक द्वीप हो भनी पुरानो नक्सा गलत रूपमा देखाइयोदेखाईयो । Las sergas de Espladián (Spladianको आनन्द) बाट नाम आएको हो , Garci Rodríguez de Montalvoले लेखेको १६ औं शताब्दीको पुस्तक, जहां एक स्वर्ग द्वीपलाई क्यालिफोर्निया भनियो।
पहिले यूरोपीय जसले तटको केही भागको भ्रमण गरे, Rodriguez Cabrillo जुआन, १५४२मा पोर्चुगलबाट आए, क्रिस्टोफर कोलंबसले पहिले भ्रमण गरेको पचास वर्ष पछी । पहिले यूरोपीय जसले पुरा तट देख्यो उनी सर फ्रान्सिस ड्रेक थिए, १५७९ मा, र उनले निर्णय गरे कि ब्रिटिश यो स्वामित्व छ। तर १७००को पछिको शुरु देखी, रोमन क्याथोलिक चर्च ("मिशनरीमिशनरियों")को स्पेनिश धार्मिक नेताहरूले स्पेनिश राजा र रानीबाट उत्तरी बाहाबाजा क्यालिफोर्नियाको क्षेत्रमा ठूलो उपहार पाए। यो धार्मिक मानिसले साना शहर र गाउँगांउ बसाए, प्रसिद्ध क्यालिफोर्निया मिशन। जब मेक्सिको अब स्पेनको द्वारा नियन्त्रितनियंत्रित भएको थिएन, मेक्सिकनमैक्सिकन सरकारले गाउँहरूगांउहरू लियो, र उनीहरूले चाडै नै खालि गरायो।▼
गार्सी रोद्रिगेस दे मोन्ताल्भोलले १६औं शताब्दीमा लेखेको ''Las sergas de Espladián'' (''एस्प्लाद्यानका अपूव अनुभव'') नामक पुस्तकबाट नाम आएको हो । त्यसमा स्वर्ग द्वीपलाई क्यालिफोर्निया भनियो।
[[चित्र:Lightmatter sanfrancisco.jpg|thumb|[[San Francisco]], California|स्यान फ्र्यान्सिस्को३००px]]▼
पहिले यूरोपीय तटको केही भागको भ्रमण गरेको पोर्चुगली जोआओं रोद्रिगेज काब्रिल्यो थिए । क्रिस्टोफर कलम्बसले अमेरिका पहिले भ्रमण गरेको पचास वर्ष पछी काब्रिल्यो १५४२मा क्यालिफोर्निया पुगे ।
१८४६ मा, मेक्सिकनमैक्सिकन अमेरिकी युद्ध शुरू भएको थियो, क्यालिफोर्नियामा केही अमेरिकीहरूले एक क्यालिफोर्निया गणराज्य बनाउने आशा राखे। यि मानिसहरूले "भालू झण्डा" फहराए जसमा एउटा तारा सहितको एक स्वर्ण भालू थियो। यस गणराज्य अचानक समाप्त भयो, तथापि, जब [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को नौसेनाको कमोडोर जन डी. स्लोटSloat स्यानसैन फ्र्यान्सिस्कोफ्रान्सिस्को खाडी तर्फ लागे। उनले भने कि क्यालिफोर्निया अब [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को हिस्सा हो। मेक्सिकोमैक्सिको संगको युद्ध समाप्त भएपछिभएपछी, क्यालिफोर्निया दुई देशहरूको बीच विभाजित गरिएको थियो। मेक्सिकन भागबाटभाग ''बाहाBaja कालिफोर्निया''California (तल्ला क्यालिफोर्नियाउत्तर) र ''बाहाBaja कालिफोर्निया सुर''California (दक्षिण)को तल्लामैक्सिकन क्यालिफोर्निया)राज्यों मेक्सिकनबन दुइगया. राज्य(स्पेनिशमा बने"बाजा"को ।अर्थ "तल्लो" हुन्छ।) [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को लागी दिईएको भागको पश्चिमी भाग क्यालिफोर्निया आज राज्य बन्यो।▼
पुरा तट देखेको पहिले यूरोपीय सर फ्रान्सिस ड्रेक १५७९ मा थिए । उनले यो ब्रिटिश स्वामित्व भएको निर्णय गरे ।
▲तर १७००को पछिको शुरु देखी, रोमन क्याथोलिक चर्च ("मिशनरी")को स्पेनिश धार्मिक नेताहरूले स्पेनिश राजा र रानीबाट उत्तरी बाहा क्यालिफोर्नियाको क्षेत्रमा ठूलो उपहार पाए। यो धार्मिक मानिसले साना शहर र गाउँ बसाए, प्रसिद्ध क्यालिफोर्निया मिशन। जब मेक्सिको अब स्पेनको द्वारा नियन्त्रित भएको थिएन, मेक्सिकन सरकारले गाउँहरू लियो, र उनीहरूले चाडै नै खालि गरायो।
▲[[चित्र:Lightmatter sanfrancisco.jpg|thumb|[[San Francisco]], California|स्यान फ्र्यान्सिस्को]]
▲१८४६ मा, मेक्सिकन अमेरिकी युद्ध शुरू भएको थियो, क्यालिफोर्नियामा केही अमेरिकीहरूले एक क्यालिफोर्निया गणराज्य बनाउने आशा राखे। यि मानिसहरूले "भालू झण्डा" फहराए जसमा एउटा तारा सहितको एक स्वर्ण भालू थियो। यस गणराज्य अचानक समाप्त भयो, तथापि, जब [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को नौसेनाको कमोडोर जन डी. स्लोट स्यान फ्र्यान्सिस्को खाडी तर्फ लागे। उनले भने कि क्यालिफोर्निया अब [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को हिस्सा हो। मेक्सिको संगको युद्ध समाप्त भएपछि, क्यालिफोर्निया दुई देशहरूको बीच विभाजित गरिएको थियो। मेक्सिकन भागबाट ''बाहा कालिफोर्निया'' (तल्ला क्यालिफोर्निया) र ''बाहा कालिफोर्निया सुर'' (दक्षिण तल्ला क्यालिफोर्निया) मेक्सिकन दुइ राज्य बने । [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को लागी दिईएको भागको पश्चिमी भाग क्यालिफोर्निया आज राज्य बन्यो।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/510431" बाट अनुप्रेषित